national | जनदिशा
गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्दै
Sahas June 12, 2021	No Comments
काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशले लामो समयको रस्साकस्सी पछि आज नयाँ सरकार पाउने भएको छ । गत बैशाखको शुरुदेखि नयाँ सरकार बनाउनका लागि राजनैतिक पार्टीबीच चलिरहेको रस्साकस्सी आजबाट टुङ्गीदै छ । वैशाख १५ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिंदै गर्दा जनमोर्चाका सांसद खीमविक्रम शाही बेपत्ता भएको भन्दै स्थगित गरिएका थियो…
View More गण्डकीमा नयाँ सरकार बन्दै
भावनात्मक उत्तेजना भनेर उन्मुक्ति हुन्‍न, शब्द फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्नुस् : शर्मा
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बागमती प्रदेशसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद नरोत्तम वैद्यले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउन आग्रह गरेका छन् । शनिबार सामाजिक सञ्‍जालमा लेख्‍दै उनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिमा अराजकता एउटै नभएको उल्लेख गरेका छन् । ट्विटरमा लेख्दै उनले वैद्यलाई शब्द फिर्ता लिई आत्मालोचना गर्न पनि भनेका छन् ।…
View More भावनात्मक उत्तेजना भनेर उन्मुक्ति हुन्‍न, शब्द फिर्ता लिएर आत्मालोचना गर्नुस् : शर्मा
देश र जनताको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्वबाट प्रधानमन्‍त्री च्युत भइसकेका हुन् ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले भारतले दार्चुलामा नेपालको भूभाग अतिक्रमण गरी सडक बनाउने काम जारी राखेको भए पनि सरकार चुप बसेको बताउका छन् । शनिबार ट्वीटरमार्फत भारतले बाटो बनाउने क्रममा गरिएको विस्‍फोटले व्यास गाउँपालिकामा घोडेटो बाटो क्षतिग्रस्त भएको समाचार आए पनि सरकार चुप बसेको बताए । उनले देश…
View More देश र जनताको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्वबाट प्रधानमन्‍त्री च्युत भइसकेका हुन् ?
बाबुरामको प्रश्न : नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाँ जोडिएको रहेछ ?
Sahas June 4, 2021	No Comments
काठमाडौँ । ओली सरकारमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोको नेतृत्वमा १० जना सहमागी भएपछि परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले आपत्ति जनाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा आफ्नो टिप्पणी लेख्दै नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाँ जोडिएको रहेछ भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले जसपाका नेताहरू सरकारमा सहभागी भएपछि अन्धराष्ट्रवादको…
View More बाबुरामको प्रश्न : नाकाबन्दीका कट्टर समर्थक र विरोधीको सालनाल कहाँ जोडिएको रहेछ ?
बरियता नमिलेको भन्दै त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद छाडे
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री हृदेश त्रिपाठीले पुर्नगठित मन्त्रिमण्डलमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । त्रिपाठीले आफूभन्दा जुनियरलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पुर्नगठित मन्त्रिमण्डलमा बस्न गरेको आग्रह त्रिपाठीले वरियता क्रम नमिलेपछि सरकारमा बस्न अस्वीकार गरेका हुन् । उनले आफू एक…
View More बरियता नमिलेको भन्दै त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद छाडे